Diuterọnọmi 34 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jehova gosiri Mosis ala ahụ (1-4)
Mosis nwụrụ (5-12)
34 Mosis wee si n’ọzara Moab gbagoo n’Ugwu Nibo,+ n’elu Pisga,+ nke chere Jeriko ihu.+ Jehova gosiri ya ala ahụ niile, malite na Gilied ruo Dan,+ 2 na Naftalaị niile na ala Ifrem na Manase, nakwa ala Juda niile ruo n’oké osimiri nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ,*+ 3 nakwa Negeb*+ ná mpaghara Osimiri Jọdan,+ ya bu, ndagwurugwu Jeriko, bụ́ obodo nkwụ, ruo Zoa.+ 4 Jehova gwaziri ya, sị: “Ọ bụ ala a ka m ṅụụrụ Ebreham, Aịzik, na Jekọb iyi banyere ya, sị, ‘M ga-enye ya ụmụ* gị.’+ Ekwela m ka i jiri anya gị hụ ya, ma ị gaghị agafe banye na ya.”+ 5 Mgbe e mechara, Mosis ohu Jehova nwụrụ n’ebe ahụ n’ala Moab otú Jehova kwuru.+ 6 O liri ya na ndagwurugwu dị n’ala Moab, n’ebe chere Bet-piọ ihu. E nweghịkwa onye ma ebe e liri ya ruo taa.+ 7 Mosis dị otu narị afọ na iri abụọ (120) mgbe ọ nwụrụ.+ Anya ya ka na-ahụ ụzọ nke ọma, ahụ́ ka sikwara ya ike. 8 Ndị Izrel beere Mosis ákwá ụbọchị iri atọ+ n’ọzara Moab. Ụbọchị niile ha ji beere Mosis ákwá ma ruoro ya uju wee gwụ. 9 Joshụa nwa Nọn nwere amamihe nke ukwuu* n’ihi na Mosis bikwasịrị ya aka n’isi.+ Ndị Izrel malitere ige ya ntị. Ha mekwara nnọọ otú Jehova nyere Mosis n’iwu.+ 10 Ma e nwebeghị onye amụma ọzọ n’Izrel nke dị ka Mosis,+ onye Jehova ma ihu na ihu.+ 11 O mere ihe àmà niile, rụọkwa ọrụ ebube niile Jehova dunyere ya ka ọ rụọ n’Ijipt, n’ihu Fero nakwa n’ihu ndị niile na-ejere ya ozi nakwa n’ala ya niile.+ 12 Mosis kpakwara nnukwu ike ma jiri aka dị ike rụọ ọrụ n’ihu ndị Izrel niile.+
^ Ya bụ, Oké Osimiri Mediterenian.
^ Ma ọ bụ “amamihe mmụọ Chineke nyere ya.”